Usoro 'Sandman' Audio na-abịa Oge Ezumike a site na Audible na DC
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Usoro 'Sandman' Audio na-abịa Oge Ezumike a site na Audible na DC
by Waylon Jọdan March 4, 2020
by Waylon Jọdan March 4, 2020 777 echiche
Usoro ihe osise nke Neil Gaiman, Ndị Sandman ahụ, abụwo ọkacha mmasị kachasị amasị ya ebe ọ bụ na e bipụtara ya na 1989, na Oge Ezumike a, Fans ga-enwe ụzọ ọhụụ ọ bụla iji nwee ọ enjoyụ ihe odide ndị a na-eji ọhụụ egwu egwu ọhụrụ site na Audible na DC Comics nke Gaiman n'onwe ya kọọrọ.
Onye Dirk Maggs duziri ya, mmegharị ahụ ga-egosipụta ụda ụda dị oke egwu na ọgaranya, ihe ntanetị dị ka nkwupụta mgbasa ozi anyị natara ugbu a. Maggs arụ ọrụ na Gaiman na mbụ na-eke audio mmegharị nke Anmụaka Anansi, Ezigbo Omume, N’ebe ọ bụla, na Stardust.
Mgbe onye anwansi choro ijide onwu nke onwu n’ime ahia nke ndu ebighebi, ya karia ihie uzo nwa nwanne nwoke onwu bu Morpheus, Eze nke Nrọ. Mgbe mkpọrọ afọ iri asaa na ngwụsị ya gasịrị, Morpheus na-achọsi ike inwetaghachi ihe ike ya furu efu ma wughachi mpaghara ya. The Sandman na-eso Morpheus, na ndị mmadụ na ebe ọ metụtara, ka ọ na-agba mbọ idozi mmegharị ahụ mmadụ na nke mmadụ mere n'oge ndụ ya na-adịghị agwụ agwụ.
Gaiman etinyela aka na usoro ọ bụla nke usoro ahụ, na-eweta Ndị Sandman ahụ ka ndụ na ọdịyo na Maggs.
“Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 gara aga, Dirk Maggs gakwuuru DC maka imeghari Ndị Sandman ahụ n'ime ụdị ọdịyo. Nke a emeghị (ọ bụ ezie na ọ bụ otú Dirk na mụ si gafee n'okporo ụzọ) enwere m obi ụtọ na nke ahụ emeghị, n'ihi na anyị nọ na Golden Age nke ihe nkiri ọdịyo ugbu a, ma mụ na Dirk ka mma na ihe anyị na-eme, ”Gaiman kwuru na nkwupụta. “Nke a bụ ọgaranya ọdịyo mmegharị nke Ndị Sandman ahụ Akwụkwọ eserese, nke sitere n'aka Dirk Maggs, nke nwere kpakpando niile. Ọ masịrị m ịnọ ebe a na-ekwu okwu nkedo, ebe a iji gụọ ederede ma na-enye ndụmọdụ oge ụfọdụ, na ebe ahụ, na-ekiri anwansi ma na-edekọ akụkọ ahụ. Enweghị m ike ichere ruo mgbe ụwa nụrụ ihe anyị mere. ”
“Nke a na audio iteration nke Ndị Sandman ahụ buru oke ibu na ochicho obi ma dabere na ihe edere Neil na ihe odide mbu nke DC. Ihe anyị rụpụtara na-abanye n'ime omimi nke Neil, ka a ga - asị na ọ na - ede akụkọ ndị a n'akụkụ anyị, na - eweli nkọwa na akụkọ banyere mmadụ ole na ole amaala ruo ugbu a, "Maggs kwukwara. “Audio pụrụ iche na-eme ka ihe nkiri ndị na-atọ ọchị na-ahụ anya na ihe ngosi Neil na-emepụta ihe, ebe ndị ịtụnanya anyị na egwu Jim Hannigan na-agbakwunye ụfụ mmetụta uche ọhụrụ. Oge oru ngo a nke iri ato kwesiri ka oge obula echere. Ọ bụ ọdịdị kacha mkpa nke Sandil nke Neil Gaiman. ”
Ndị Sandman ahụ abụwo ihe onwunwe na-ekpo ọkụ kemgbe ọtụtụ afọ na ọtụtụ mgbalị iji gbanwee, ọtụtụ n’ime ha enwebeghị ike ịmị mkpụrụ – ọ bụ na nso nso a ka a mara ọkwa na Netflix ahọrọla ihe ngosi nke akụkọ ahụ–Mgbe ahụ ọ ga - abụ ọgwụgwọ pụrụ iche nye ndị Fans iji hụ ụdị mmegharị ọrụ Gaiman.
Nwere ike ịlele AUDIO CLIP maka usoro ọhụrụ site na Pịa ebe a.
Enweghị okwu ọ bụla na nkedo maka usoro ọdịyo. Mbido mbụ nke Ndị Sandman ahụ Ọ ga-adị maka nbudata Summer 2020 na bekee yana mbipụta ndị ọzọ na French, German, Italian, na Spanish.